Mareykanka oo sheegay in duqeyn ku dileen 150 dagaalyahan ka tirsan Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Dadka deegaanka ayaa Axadii shalay u sheegay Warbaahinta in duqeymo culus ay ka dhaceen deegaano dhinaca galbeed kaga beegan degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan.
Afhayeen u hadlay Pentagon-ka oo lagu magacaabo Captain Jeff Davis ayaa sheegay in duqeynta lala beegsaday xero Al-Shabaab ku tababarnayeen, kuna diyaarinayeen weerar weyn oo halis ah
“Waxaan ogeyn inay xerada uu ka socday diyaarinta weerar weyn oo halis ah, kana dhan ah Mareykanka iyo Ciidamada Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya”ayuu yiri Col. Davis
“Qiimeynta horu dhaca ah waxay sheegeysaa in ka badan 150 oo argagixiso ah lagu dilay weerarkaas”ayuu sii raaciyay.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in weerarka uu dhacay Sabtidii, halka la bartilmaameedsaday oo aheyd xero Al-Shabaab lahaayeen ay waqooyi kaga beegan tahay magaalada Muqdisho illaa 195KM.
Mr Davis ayaa sheegay in ka hor inta aanay duqeynta fulin diyaarada Drone ah ay xeradaas dhowr jeer sahansadeen ama ay basaaseen muddo todobaad ah.
Duqeymaha ayaa la sheegay inay ka qeyb qaateen diyaarado aan duuliye laheyn iyo kuwa duuliye lahaa, waxaana aaga la weeraray dadka ay sheegeen inay ka arkayeen qiic ka baxayay.
Diyaaradaha aanay duuliyaha ee Drones ayaa dhowr jeer oo hore duqeymo ka fuliyay Koofurta Soomaaliya, kaasoo lagu dilay Hogaamiyeyaal ka tirsanaa Al-Shabaab.
Lama oga illaa iyo hada hadii weerarka cirka ah lagu dilay saraakiil sar sare ah oo ka tirsan Al-Shabaab, mana jirto wax war ah oo ka soo Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay Cabdi Waal oo laga soo qabtay Kenya